Wasiirkii qoray ishortaaga aqoonsigii Khaatumo State oo xilkiia laga qaaday – SBC
Wasiirkii qoray ishortaaga aqoonsigii Khaatumo State oo xilkiia laga qaaday
Posted by editor on Maarso 30, 2012 Comments
Mid ka mid ahaa xubnaha golaha wasiirada dawlada KMG Soomaaliya ayaa saaka xilkiisii wasiirnimo cadceedo u soo bixin ka dib markii xilkiisii lagaga qaaday wareegto ka soo baxdey xafiiska madaxtooyada Soomaaliya.
Wasiirkii beeraha xaanada xoolaha, dhirta & daaqa Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim ayaa ujeedada lagaga qaaday waxaa lagu sheegay wareegtada uu soo saarey madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu ku macneeyey in wasiirku uu gudan waayey xilkiisii isla markana xilkaasi laga xayuubiyey.
Laakiin diblumaasiyiinta u dhuundaloola arimaha siyaasada Soomaaliya ayaa ku macneeyey talaabada xilka looga qaaday wasiirka inay tahay iyadoo loo aaneynayo qoraalkii bishii hore uu soo saarey ee uu ku buriyey qoraal hore oo uu soo saarey Madaxweynuhu oo ku aadanaa aqoonsiga maamulka Khaatumo State ee dhawaan lagu dhisay shirkii ka dhacay degmada Taleex.
Wasiirka xilka laga qaaday oo xiligaasi ahaa kusimaha Ra’isalwasaaraha ayaa qoraalka uu soo saarey bishii hore wuxuu ku muujiyey sida Madaxweynuhu ugu fududaay aqoonsiga maamulka Khaatumo, isla markaana uusan u bixin karin aqoonsigaasi, arintaasi oo la aaminsan yahay inay udug dhexaad utahay sababaha xilka looga qaaday.
Qoraalka wareegtada Madaxweynuhu xilka kaga qaaday wasiirka hoos ka aqri.
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xilkii looga qaaday Wasiirkii Wasaaradda Beeraha,Xanaanada Xoolaha,Dhirta iyo Daaqa.
Markuu arkay:- Qodobka 44aad,xubintiisa 3aad ee Axdiga kumeel gaarka ah.
Markuu arkay:- Qodobka 2aad sharci lam.14 ee 3di juun 1962kii iyo wax ka baddalkii ka danbeeyey ee Nidaamka Dowladda (Ordinamento del Governo).
Markuu tixgeliyey:- Soo jeedintii Ra’isulwasaaraha, Sumad XRW/412/03/2012 kuna taariikheysan 20ka Maarso 2012ka oo ku saabsan xil gudasho la’aanta Wasiirka Wasaaradda Beeraha,Xannaanada Xoolaha,Dhirta iyo Daaqa
Asagoo Aqoonsaday:- in ay waajib tahay in shaqada Qaran loo guto si hufnaan,Amaano iyo karti ku dheehanyihiin.
Wuxuu Soo Saarayaa Xeerkan:-
Waxaa xilkii Wasiirnimo ee uu hayey laga qaaday: Mudane Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim oo ahaa Wasiirkii Wasaaradda Beeraha,Xannaanada Xoolaha,Dhirta iyo Daaqa.
Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa isla marka uu saxiixo Madaxweynaha, waxaana lagu soo saarayaa faafinta Rasmiga ah ee Dowladda.
Halkan ka aqri qoraalkii wasiirku ku buriyey aqoonsigii Sheekh Shariif ee ku aadanaa aqoonsiga Khaatumo State
Maarso 30, 2012 at 9:57 am
Hadeysan kala dambeyn jirin dowladnimo jirimeyso! Marka wasiirka qalad weyn buu sameeyay munaasabkeediina waa helay. Waa tusaale fiican.
Maarso 30, 2012 at 10:36 am
Anigoo ah abwaan xirsi xuseen faarax (xirsi deni) kana mid ahaa abwaaniinta kooxda horseed banaadir xiligi siyad barre waxaan dawladgoboleedka puntland usheegayaa inaan sameeyey kana soo maaxatay fekradayda calanka puntland anigoo jooga dalka koonfur afrika waxaana ku marayaa 114ka quraanka xaqa ah.waxaan haystaa 2marqaanti markaan naqshadeynayey una diray mesage c/shiid jaamac cali oo jooga s.afrika igana soo codsaday alifaada isaga iyo laba hees calan waan udiray una sharaxay waxan iri waa barwaaqo soomaalinimo iyo nabad qaabka ranjigana waan usheegay sida loo kala kormarinayo waxan iri magaca anaa iska leh wixii abaal marina waa inoo dhex waxan qabsanayaa loyar caalami ah diyaarna waxan u ahay dhaar aniga iyo c/shiid iyo marqaantiyadayda nadhex marta iyo cidda ay puntland siisay magaca calanka ama dhaqaalaha puntland waxan karabaa caddaynta calamka laakiin weli mahubo heesta inaan leeyahay waayo maan arag
Maarso 30, 2012 at 11:55 am
Ciddii isku dayda inay Khaatumo ishortaagto sidaas iyo wax ka daran baa sugaya. Khaatumo waxay u socotaa inay wadankan u soo celiso nidaamkii, dawladnimaddii, wadaniyaddii, iyo difaacii iyo jihaadkii xaqa ahaa ee diinta islaamka. Hadduu Faroole si dhakhsaha u aqoonso waayo oo weliba raaligelin u bixin waayo isagaa ku xiggi doona inuu xilkiisa waayo.
Maarso 30, 2012 at 12:53 pm
madaxweyne shiikh shariif wuu ku mahadsan yahay taageeradiisa khaatumo state ,runtii xili adag oo ay shacabka goboladaasi taageero siyaasaded u baahan yihin ayuu garab isataagay ,waxaan filayaa doorashada socota ee august khaatumo aday kuu codayndoontaaaa
waayo siyaasada aya ah waxkala badalasho
puntland youth director says:
Maarso 30, 2012 at 3:32 pm
waxaan u arkaa xilka qaadistaa soo jiidasho uu wada shiikh shariif uuna kuso jiidanayo odayasha daga sool degmada buurtinle kana faa’ideysanayaa kala cararka dadla dagan degaanada puntland waana uu ku qaldanaa shiikh shariif xasan casilada shiikhu wuxuu kututay axdiga ku meel gaarka ah
Maarso 30, 2012 at 4:24 pm
ASCaleykum Dawladnimadu waa sidaas qalad hadaad gasho waad dhadhaminaysaa waxaad samaysay ragga kale oo dhibka wadana sidaas ayaa u danbayn doonta illaah SWT ayaa naga qabanaya hadii aay isleeyihiin waxba laydinkama qaadi karo, waxaan kaloo oran lahaa waa inuu kabixiyaa raaligelin haduu caqli leeyahay, asagga iyo inta qaladkaan oo kale galay ayey digniin u tahay sc.
Maarso 30, 2012 at 10:29 pm
Asc w w waxaan salaamayaa abwaanka fakarkiisi la boobay. Abwaan Raali noqo Allaha kaa raali noqdee anigu waxaan kugula talin in aad wadankii aado oo aad madaxda puntland ula tagto arintan laakiin waxba kuu qaban mayso website war lagu soo qoray waxaaba laga yaaba in ayan arag masuuliyiintii wadanka.
Maarso 31, 2012 at 12:30 am
Ninkaan wasiirka arimaha dibada ayaan umalaynayey. Goormuu beeraha noqday? Anyway, dhib malaha. Cashar cusub iga dheh. Next resume wuxuu ku qorayaa markay waydiiyaan sababta shaqadiisi hore uu uga tegay: Madaxwaynahayga ayaan kadba hadlay oo garab cararay taasoo xitaa sii adkayndoonata inuu shaqo kale helo. Anyway cashar ayey bareen ay wax ku qaadan karaan wasiirada kale. Asagana waxaan leeyahay, good luck bro in finding for a new job!
Abdulahi Ahmed says:
Maarso 31, 2012 at 8:50 am
waar hor leh waxaan la yaa banahay sh. shariif waxa uu u qaban karo waxa laleeyahay
Maarso 31, 2012 at 9:02 am
waar hor leh waxaan la yaa banahay sh. shariif waxa uu u qaban karo waxa laleeyahay khaatumo , maleh matax weynuhu maba akkrin Tastuurka Dowladda